Iindaba -Iinyani zePopcorn
1) Yintoni eyenza iPopcorn Pop? Ikernel nganye yepopcorn iqulethe ithontsi lamanzi eligcinwe ngaphakathi kwesangqa sesitatshi esithambileyo. (Kungenxa yoko le nto ipopcorn ifuna ukuba ne-13.5 yeepesenti ukuya kwi-14 yeepesenti yokufuma.) Isitatshi esithambileyo singqongwe ngumphandle wangaphandle we-kernel. Njengokuba ikernel ishushu, amanzi aqala ukwanda, kwaye uxinzelelo luyanda ngokuchasene nesitatshi esinzima. Ekugqibeleni, obu bunzima bomhlaba bunikezela, obangela i-popcorn ukuba "iqhume". Njengoko iipopcorn ziqhuma, isitatshi esithambileyo ngaphakathi kwipopcorn siyakhuphuka kwaye sigqabhuke, siguqule i-kernel ngaphakathi. Umphunga ongaphakathi kwe-kernel uyakhutshwa, kwaye i-popcorn iyaphuma!
2) Iindidi zee-Popcorn Kernels: Iintlobo ezimbini ezisisiseko zee-popcorn kernels "ibhabhathane" kunye "nekhowa". I-kernel yamabhabhathane inkulu kwaye intofontofo 'inamaphiko "amaninzi aphuma kwikernel nganye. Iibhola ze-Buttefly lolona hlobo luqhelekileyo lwepopcorn. I-mushroom kernel ijijekile kwaye ihambelana kwaye imile okwebhola. Iinkozo zamakhowa zigqibelele kwiinkqubo ezifuna ukuphathwa okunzima kweenkozo ezifana nokwaleka.
3) Ukuqonda ukwanda: Uvavanyo lokwandiswa kwepop lwenziwa ngeCretors Metric Weight Volumetric Test. Olu vavanyo lwamkelwa njengomgangatho ngumzi mveliso wepopcorn. I-MWVT ngumlinganiso weetyhubhu iisentimitha zombona ophumayo nge-1 gram yengqolowa engafakwanga (cc / g). Ukufundwa kwe-46 kwi-MWVT kuthetha ukuba i-1 gram yengqolowa engafunyanwanga iguquka ibe zii-cubic centimeter ezingama-46 zombona ovunyiweyo. Ukunyuka kwenani le-MWVT, kokukhona ubungakanani bembewu ephuphiweyo ngokobunzima bengqolowa engavunywanga.
4) Ukuqonda ubungakanani beKernel: Ubungakanani beKernel bulinganiswa nge-K / 10g okanye iinkozo nge-10 yeegram. Kolu vavanyo iigram ezili-10 zepopcorn ziyalinganiswa kwaye iinkozo zibaliwe. Ukuphakama kwekernel kubala ubungakanani be kernel. Ukwanda kwepopcorn akuchaphazeli ngokuthe ngqo ubungakanani bekernel.
5) Imbali yePopcorn:
· Nangona ipopcorn kusenokwenzeka ukuba yavela eMexico, yayilinywa eTshayina, eSumatra naseIndiya kwiminyaka ngaphambi kokuba uColumbus atyelele eMelika.
· Iingxelo zeBhayibhile "zengqolowa" ezigcinwe kwiiphiramidi zase-Egypt aziqondwa kakuhle. "Umbona" ​​ovela kwibhayibhile mhlawumbi ibhali. Impazamo ivela kutshintsho olusetyenzisiweyo lwegama elithi "umbona," ebelisetyenziselwa ukubonisa ezona zisetyenziswa kakhulu kwindawo ethile. ENgilani, "umbona" ​​wawuyingqolowa, kwaye eScotland naseIreland igama lalibhekisa kwi-oats. Kuba umbona wawuyinto "eqhelekileyo" yaseMelika, yathatha elo gama- kwaye iyawugcina namhlanje.
· Oyena mdala wamazimba aziwayo awunohluki kakhulu nomungu wombona wale mihla, xa kuthelekiswa nefosili eneminyaka engama-80,000 ubudala eyafunyanwa kumazantsi e-Mexico City.
Kukholelwa ukuba ukusetyenziswa kokuqala kombona wasendle kunye nasekuqaleni.
· Ezona ndlebe zindala ze popcorn ezakhe zafunyanwa zafunyanwa kwi Cave Bat kwintshona ye New Mexico ngo-1948 no-1950. Ukusukela kwincinci encinci ukuya kwi-2 intshi, ezona ndlebe zindala zeBat Cave zineminyaka engama-5,600 ubudala.
Emangcwabeni kunxweme olusempuma yePeru, abaphandi bafumene iinkozo zepopcorn mhlawumbi iminyaka eyi-1 000 ubudala. Ezi ngqolowa zigcinwe kakuhle kangangokuba ziya kuhlala zivela.
Emazantsi-ntshona eUtah, intshontsho lepopcorn elineminyaka eli-1 000 lafunyanwa kumqolomba owomileyo owakhiwe ngabantu ababengaphambi kwamaIndiya asePueblo.
· Umngxunya womngcwabo waseZapotec owafunyanwa eMexico kwaye uthandana malunga ne-300 AD ubonakalisa uthixo wombona onemiqondiso emele iipopcorn zakudala kwintloko yakhe.
· Iipopika zamandulo zepipi - iinqanawa ezinzulu ezinomngxuma ngaphezulu, isiphatho esinye maxa wambi esihonjiswe ngemifanekiso eqingqiweyo enjengekati, kwaye ngamanye amaxesha ihonjiswe ngemibala eprintiweyo kuyo yonke inqanawa - zifunyenwe kunxweme olusemantla ePeru kunye nomhla ukubuyela kwi-pre-Incan Mohica Culture malunga ne-300 AD
Uninzi lweepopcorn kwiminyaka engama-800 eyadlulayo yayinzima kwaye icekecekile. Iinkozo ngokwazo zazomelele ngokwaneleyo. Nanamhlanje, ngamanye amaxesha umoya uvuthuza iisanti zasentlango kwimingcwabo yakudala, uveza iinkozo zombona opopileyo obonakala umtsha kwaye umhlophe kodwa sele uneminyaka emininzi ukho.
Ngexesha i-Yurophu yaqala ukuzinza "kwiLizwe elitsha," iipopcorn kunye nezinye iintlobo zombona zazisele zisasazekile kuzo zonke izizwe zoMdabu zaseMelika eMantla nase Mzantsi Melika, ngaphandle kwalawo akwezona ndawo zikumantla nakumazantsi amazwekazi. Zingaphezu kwe-700 iintlobo zepopcorn ezazikhuliswa, uninzi lweepipi ezigabadeleyo zazenziwe, kwaye iipopcorn zazinxitywa ezinweleni nasentanyeni. Kwakukho notywala obuninzi obusetyenziswa kakhulu.
Ukufika kukaColumbus okokuqala kwiWest Indies, abemi balapho bazama ukuthengisa iqela labasebenzi.
Ngo-1519, uCortes wabona ipopcorn okokuqala xa ahlasela iMexico kwaye wadibana nama-Aztec. IPopcorn yayikukutya okubalulekileyo kumaIndiya ama-Aztec, nawo ayesebenzisa iipopcorn njengomhombiso wentloko, izacholo zomqala kunye nezinto zokuhombisa kwimifanekiso eqingqiweyo yoothixo babo, kubandakanya iTlaloc, uthixo wombona, imvula kunye nokuzala.
Ingxelo yokuqala yaseSpain yomsitho wokuhlonela oothixo bama-Aztec ababebukele abalobi ifundeka ngolu hlobo: “Basasaza phambi kwakhe umbona owomileyo, obizwa ngokuba yi-momochitl, uhlobo lwengqolowa oludubula xa luthile luze luchaze oko luqulethweyo luze luzenze lube njengentyatyambo emhlophe kakhulu. ; bathi la ngamatye esichotho anikwe uthixo wamanzi. ”
· Ebhala amaIndiya asePeru ngo-1650, iSpanishard Cobo ithi, “Bathambisa uhlobo oluthile lwengqolowa lude luqhume. Bayibiza ngokuba yi-pisancalla, kwaye bayisebenzisa njengesihlanganisi. ”
Abahloli bamazwe baseFrance bakuMmandla weLwandle oluKhulu (malunga nonyaka we-1612) baxela ukuba amaIroquois afaka ipopcorn kwisitya sodongwe nesanti eshushu kwaye ayisebenzisa ukwenza isupcorn soup, phakathi kwezinye izinto.
· Abakholoniyali abangamaNgesi baziswa ngee popcorn kumsitho wokuqala wombulelo ePlymouth, eMassachusetts. UQuadequina, umzalwana wenkosi yaseWampanoag iMassasoit, wazisa ibhegi yesikhumba sengqolowa kumbona osisipho.
AmaMelika aseMelika ayeza ne-popcorn "amashwamshwam" kwiintlanganiso kunye nabakholoniyali abangamaNgesi njengophawu lwentando ngexesha lothethathethwano ngoxolo.
· Oomama basekhaya abangamaKoloniyali baphaka ipapa kunye neswekile kunye nokhilimu kwisidlo sakusasa- ukutya okutya kwasekuseni okuqala "okukhukhumeleyo" okutyiwa ngabantu baseYurophu. Abanye babakholoniyali bavelisa umbona besebenzisa isilinda yesinyithi esincinci esasijikeleza kwi-asi engaphambi kwendawo yomlilo njengendlwana yomatse.
I-Popcorn yayithandwa kakhulu ukusukela ngeminyaka yoo-1890 de kwaba luDano olukhulu. Abathengisi basesitratweni babedla ngokulandela izihlwele zijikeleze, ukutyhala umphunga okanye i-pop-power poppers ngokusebenzisa ii-fairs, iipaki kunye nemiboniso.
Ngexesha lokudakumba, ipopcorn nge-5 okanye kwi-10 iisenti ibhegi yenye yeendlela ezimbalwa zodidi oluphantsi kunye neentsapho ezinokufikelela kuzo. Ngelixa amanye amashishini asilele, ishishini lepopcorn lakhula. Ibhanki yase-Oklahoma eyaphuka xa ibhanki yayo isilele yathenga umatshini wepopcorn kwaye yaqala ishishini kwivenkile encinci kufutshane neholo yemidlalo yeqonga. Emva kweminyaka embalwa, ishishini lakhe leepopcorn lenza imali eyoneleyo yokubuyisa iifama ezintathu awayephulukene nazo.
· Ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, iswekile yathunyelwa phesheya kwemikhosi yase-US, oko kwakuthetha ukuba kwakungekho shukela ishiyekileyo eMelika ukwenza iilekese. Ndiyabulela kule meko ingaqhelekanga, amaMelika ayitya kathathu ipopcorn njengesiqhelo.
I-Popcorn yangena kwislump ngexesha le-1950s, xa umabonwakude waduma. Ukuzimasa kumabala emidlalo bhanyabhanya kwehlile kwaye, kunye nayo, ukusetyenziswa kwepopcorn. Xa uluntu luqala ukutya ipopu ekhaya, ubudlelwane obutsha phakathi komabonwakude kunye neepopcorn kukhokelele ekuvukeni kokuthandwa.
· Imicrowave popcorn - ukusetyenziswa kwayo kokuqala kokufudumeza ngemicrowave ngeminyaka yo 1940 - sele inezigidi ezingama-240 zeedola kwintengiso yepopporn yaseMelika ngeminyaka yoo-1990.
Abantu baseMelika namhlanje basebenzisa i-17.3 yezigidigidi zeepopcorn ngonyaka. Umndilili waseMelika utya malunga neekota ezingama-68.
Iiparcorn zeCaramel, I-China ikwelwe ukuba yenziwe Igumbi lokufundela, Amaqhashu, INDIAM popcorn,